Accueil > Gazetin'ny nosy > Roland Ratsiraka sy Rachidy Mohamed : Mampisandoka andraikitra olona
Roland Ratsiraka sy Rachidy Mohamed : Mampisandoka andraikitra olona
Anio no hotanterahina etsy amin’ny trano fandraisam-bahinin’i Carlton ny valandresaka arahina ady hevitra (conference débat) izay karakarain’i Roland Ratsiraka sy ny Vondron-kery politika Panorama tarihin-dRachidy Mohamed.
Niteraka ady hevitra be io hetsika io omaly tontolo satria amin’ny fikarakarana sy ny fandaminana dia efa nibaribary ny fisandohana sy fisolokiana.
Voalohany aloha, ho an’ny mpikarakara, dia manitikitika ny sain’ny mpanara-maso ny hoe “ny olona iray ao anatin’ny andrimpanjakana, toy ny depiote, ve dia afaka misalotra ny anaran’ny Antenimierampirenena?” Ny taratasy fanasana mantsy dia ahitana ny sary famantarana ny “Antenimierampirenena”.
Faharoa, ny olona handray anjara ao amin’ilay valandresaka arahina ady hevitra ve dia ampidirina fotsiny ao anatin’ny fandaminana na tsy nanontaniana sy nakana ny heviny na ny fankatoavany aza? I Andoniaina Andriamalazaray, ohatra, izay filoha nasionaly teo aloha nitarika ny KMF-CNOE aryisan’ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny Vaomierampirenena mahaleotena momba ny fifidianana (Ceni) dia natsofoky ny mpikarakara ho isan’ireo mpandray anjara manao famelabelarana. Izy anefa dia tsy nangatahina na niangaviana na nanontaniana na nakana fankatoavana akory fa dia naiditra anjambany tao, ary namoaka fanambarana mihitsy ny KMF CNOE fa “sady tsy filoha nasionalin’ny KMF CNOE intsony no tsy nahazo alalana hiteny amin’ny anaran’ity fikambanana ity izy”. Izy rahateo dia nanipika an’izany ihany koa. Etsy ankilany, nomarihin’i Andoniaina Andriamalazaray koa fa “tsy mbola mandray ny asany amin’ny maha-mpikambana ao amin’ny CENI azy ny mpikambana vaovao ao amin’io rafitra io ka misandoka andraikitra ny tenany raha milaza fa“ misolotena ny CENI ao amin’io hetsika karakarain’i Roland Ratsiraka sy ny Vondrona Panorama io.
Dia samia isika mieritreritra fa ny fanajana ny arofenitra sy ny pitsopitson-draharaha aza tsy hain-dry Roland Ratsiraka sy ry Rachidy Mohamed nefa miana-kendry ho tapi-pahaizana amin’ny fanaovana politika.